အသစ်သော အသက်တာ (The New Life) | Shwe Canaan TV
အသစ်သော အသက်တာ (The New Life)
00Unknown Monday, 23 May 2016
ကလေးတစ်ယောက်သည် မွေးဖွားလာချိန်၌ မည်သည့်အရာကိုမျှ မလုပ်ဆောင်တတ်သေးပေ။ လမ်းမလျှောက် နိုင်သေးသလို၊ စကားလည်း မပြောနိုင်သေးပေ။ မိမိကိုယ်တို...
လမ်းမလျှောက် နိုင်သေးသလို၊ စကားလည်း
မပြောနိုင်သေးပေ။ မိမိကိုယ်တိုင် အစားအစာကို
မစား နိုင်သေးသလို၊ ကိုယ်တိုင် မရှာဖွေတတ်
သေးပေ။ ဗိုက်ဆာသည့်အခါ အနှီးစိုစွဲသွားသည့်
အခါ ငိုကြွေးခြင်းမှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ မ
သို့သော် သူသည် တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက်ကြီးပြင်း
လာပြီး ပြုံးပြတတ်လာသလို၊ စကားလည်း တစ်ခွန်းစ နှစ်ခွန်းပြောတတ်လာသည်။ အရုပ်ကလေးများနှင့် ဆော့ကစားတတ်လာသလို၊ ကိုယ်တိုင် စားတတ်လာသည်။ ထိုင်တတ်လာသလို၊ တဖြည်းဖြည်း လက်ဘက်ထောက်တွားတတ်လာသည်။
မတ်တပ်ရပ် လမ်းလျှောက်တတ်လာသလို၊ စကားကိုလည်း ပြောတတ် လာပြီး နောက်ဆုံး ပြေးလွှား ဆော့ကစားတတ်လာသည်ထိ ဖြစ်လာသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှ လူပျို၊ အပျိုအရွယ်သို့ ရောက်လာသည်။ ထိုအရွယ်မှာ ချစ်သူရှိလာသည်။ အိမ်ထောင်ကျလာသည်။ ကလေးရလာသည်။ မြေးရလာသည်။ နောက်ဆုံး အိုမင်းရင့်ရော်လာ၍ သေဆုံးချိန်ရောက်လာသည်။ ဤအချိန်မှာ လူ့ ဘ၀ အသက်တာ၏ ကြီးရင့်အဆုံးသတ်ပုံ ဖြစ်သည်။
၀ိညာဉ်ရေးရာ ကြီးထွားရင့်ကျက်မှုသည်လည်း ဤကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်တို့ အားလုံး သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည့် နေ့မှာ ၀ိညာဉ်ကလေးများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၀ိညာဉ် ရေးရာ ရင့်ကျက်မှု ခရီးရှည်ကြီးကို နှင်စပြုလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤခရီးရှည် တစ်လျှောက်လုံး လိုအပ်နေ သော ၀ိညာဉ်အစာအဟာရများကို ဘုရားသခင်က သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စကားတော်အားဖြင့် ပံ့ပိုးပေး သည်။ ထိုအစာအဟာရကို စားသုံးမှသာ ကြီးရင့်သောသူ အဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ ၀ိညာဉ်ကလေးများ မွေးဖွားခြင်း အဆင့်သို့လည်းကောင်း၊ ရောက်ရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့ အထဲ၌ ရှိသော ဘုရား God in us
ကျွနု်ပ်တို့ကို အသစ်သော အသက်တာ၌ မွေးဖွားစေခဲ့သောသူသည် ကျွနု်ပ်တို့ အထဲ၌ အလုပ်လုပ်တော်မူသော ဘုရားသခင်ပင် ဖြစ်သည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက “သင်တို့သည် အလိုရှိ စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ အကျင့်ကျင့်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့အထဲ၌ စေတနာတော် အားဖြင့် ပြုပြင်တော်မှုသောသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း” ဟု ပြောပါသည် (ဖိလိ၊ ၂း ၁၃)။
ကျွနု်ပ်တို့မှာ ကောင်းသောအရာကို လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဆန္ဒနှင့် အစွမ်းခွန်အားမရှိကြောင်း ဘုရားသခင် သိတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် သူ၏ စိတ်နှလုံးတော်ကို ထိတွေ့ စေမည့် အစွမ်းခွန်အားများကို ပေးသနားတော်မူပြီး ဘုရားသခင်၏ မစခြင်းအားဖြင့် အပြစ်တရားကို အောင်မြင်၍ အသက်သော အသက်တာ၌ အသက်ရှင်ကြသည်။
အပြစ်တရားနှင့် ဆိုင်ပြိုင်နေသော ပေါလု
Paul’s Struggle with Sin
ရောမသြဝါဒစာ ၇း ၁၄ -၂၅ တွင် ရှင်ပေါလုက သူသည် အပြစ်တရားနှင့် လုံးပန်းခဲ့ရကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။ ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူးခြင်းသည် ဒုစရိုက်ဖြစ်သည် (၁ ယော၊ ၃း ၄)ဟု ကျမ်းစာက ဖော်ပြထားသော်လည်း ရှင်ပေါလုအနေဖြင့် မောရှေ၏ ပညတ်တော်များကို စောင့်ထိန်းနိုင် ခြင်းမရှိခဲ့။ ကြိုးစား၍ စောင့်ထိန်းနေပါသော်လည်း လွန်ကျူးနေရသည်။
ထို့ကြောင့် သူက ‘ငါ့အထဲမှာ ငါ့ဖာတိပကတိ၌ ကောင်းသောအရာ တစ်စုံတခုမျှ မတည် သည်ကို ငါသိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ကျင့်ချင်သော စိတ်ရှိသော်လည်း ကောင်းစွာ ကျင့်တတ် သောအခွင့်ကို ရှာ၍မတွေ့ နိုင်။ ငါသည် ကျင့်ချင်သော အကျင့်ကောင်းကို မကျင့်။ မကျင့်ချင်သော အကျင့်ဆိုးကို ကျင့်၏’ (ရောမ၊ ၇း ၁၈-၁၉)ဟု ပြောပါသည်။
သူသည် ဘု၇ားသခင်ကို ပုန်ကန်သောသူ တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ သောသူ၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် သေက်ရှင်လိုသောသူ၊ ဘုရားဘက်၌ နှစ်ပိုင်းပိုင်းခြင်း ခံရသည်။ သူ၏ အပြင်လူ ဇာတိခန္ဓာကိုယ်က သူ့ ကို တစ်ဖက်သို့ ဆွဲခေါ်နေသကဲ့သို့၊ သူ၏ အတွင်း၀ိညာဉ်ကလည်း တစ်ဖက်သို့ ဆွဲခေါ်လျက်နေသည်။ သူ၏ အတွင်း၀ိညာဉ်က ပညတ်တော်ကောင်းသည်ဟူသော အချက်ကို လက်ခံထားသလို ထိုပညတ် တော်ကိုလည်း စောင့်ထိန်းလို၏။ အပြစ်တရားကိုလည်း ရွံ့ မုန်း၏။ သို့သော်အပြစ်တရားက သူ၏ ကိုယ်အင်္ဂါများ၌ အလုပ်လုပ်နေသည်။
ရှင်ပေါလု လုံးပန်းခဲ့ရသော အပြစ်တရားသည် လူတိုင်းရင်ဆိုင်ရသော အပြစ်တရားပင် ဖြစ်သည်။ သူက ‘ထိုသို့ ကောင်းသောအကျင့်ကို ငါကျင့်ချင်သောအခါ မကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်စေတတ်သောတရားကို ငါတွေ့ ၏။ ငါသည် အတွင်းလူအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ကို နျစ်သက်၏ သို့သော်လည်း ငါ့ကိုယ်အင်္ဂါများ၌ရှိသော တရားတစ်ပါးသည် ငါ့ကို ဖမ်းသွားအပ်နှံသည်ကို ငါမြင်၏’ (ရောမ ၇း ၂၁-၂၃)ဟု ဆိုပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အပြစ်က ကျွနု်ပ်တို့ ကိုယ်အင်္ဂါ၌ ရှိနေသော ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ စစ်ပြိုင်ခြင်းရှိ၏။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်သော ကျွနု်ပ်တို့၏ ၀ိညာဉ်က သာ၍ မြင့်ရာ ကုန်းမြင့်ပေါ်သို့ မြှင့်တင်ပေးနေသော်လည်း၊ ပျော်မွေ့ ခြင်းကို နှစ်သက်သော ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ် ခန္ဓာက အပြစ်တရားကဲ့သို့ ဆွဲခေါ်လျက်နေသည်။ ဘုရားသခင်၏ မစခြင်းကို မခံယူမချင်း အပြစ်တရား က အောင်မြင်စွာ ဖမ်းသွားချုပ်ထားနေမည်သာ ဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလု၏ အော်ဟစ်ငိုကြွေးခြင်း Paul’s Cry
ရှင်ပေါလုသည် သူ၏ အသက်တာ၌ အပြစ်တရားနှင် ဆိုင်ပြိုင်နေသဖြင့် ‘ငါသည် ငြိုငြင်သော သူ ဖြစ်ပါသည်တကား’ (ရောမ ၇း ၂၄က)ဟု ဟစ်အော်ခဲ့ပါသည်။ ‘ဤအသေကောင် (၀ိညာဉ် သေခြင်း)မှ ငါ့ကို အဘယ်သူ ကယ်လွှတ်မည်နည်း’ (ရောမ ၇း ၂၄ခ)ဟု ဆက်၍ ငိုကြွေးခဲ့သည်။ ဂရိစကားလုံးက ‘ငြိုငြင်’ ကို ‘ပင်ပန်းခြင်း’ အနက်သဘောဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလု သည် ပင်ပန်းသောသူ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူ့ မှာ အပြစ်တရားနှင့် ဆိုင်ပြိုင်ခြင်းက သူ့ အားခံ နိုင်ရည် နည်းပါးစေခဲ့သည်။ သူ၌ အစွမ်းခွန်အားများ မရှိတော့။ ထို့ကြောင့် သူက ‘အဘယ်သူ ကယ်တင်မည်နည်း’ ဟု ပြင်းစွား ဟစ်အော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ မေးခွန်းအတွက် သူကိုယ်တိုင်ကပင် ချက်ချင်းဖြေကြားလိုက်သည်။ ‘ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်လွှတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်ဒ ကျေးဇူးတော် ကြီးလှပေ၏’ ဟူ၍ (ရောမ ၇း ၂၅)။ ရှင်ပေါလု၏ ဆိုးဝါးစွာ အော်ဟစ်ခြင်းနောက်မှာ ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းက လိုက်လာသည်ကို တွေ့ ရသည်။
အပြစ်တရားနှင့် ဆိုင်ပြိုင်နေသော ကျွနု်ပ်တို့ Our Struggle with Sin
ခရစ်ယာန်တိုင်း ရှင်ပေါလုကဲ့သို့သော အတွင်းပိုင်း ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲနေကြသည်။ ဒုတိယ မွေးခြင်းခံပြီးပြီးချင်း စာတန်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို ပြန်လည် သိမ်းသွင်းရန် ကြိုးစားနေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးသည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ပြိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိလေသာ စိတ်၊ ဝါကြွားခြင်း၊ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ စသည့်အပြစ်တစ်ခုခုနှင့် ဆိုင်ပြိုင်နေကြသည်။ အပြစ် တစ်ခုကို လွန်ကျူးမိတတ်ကြသည်။ ဤအသွေးအသားကို ပိုင်ဆိုင်နေသရွေ့ အပြစ်တရား လွန်ကျူး ခြင်းမှ အပြီးအပိုင် မလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။
သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို ကူညီနေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ၀ိညာဉ်တော်အား ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ အတွင်းလူကို ခွန်အားနျင့် မြဲမြံခိုင်ခံ့စေသည် (ဧဖက် ၃း ၁၆)။ စာတန်မာရ်နတ်ရန်ကို အောင်မြင်နိုင်အောင် တန်ခိုးကိုလည်း ပေးတော်မူမည် (ရောမ ၁၆း ၂၀)။ ‘သို့ရာတွင် ငါတို့သည် ကိုယ့်တန်ခိုးကို အမှီပြု၍ ကိုယ့်အလိုအလျောက် တစ်စုံတစ်ခုကို ကြံစည်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူသည် မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကို အမှီပြု၍သာ တတ်နိုင်ကြသည်’ (၂ ကော၊ ၃း ၅)။ ‘ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော သူ၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ငါတို့သည် ထိုအမှုခပ်သိမ်းတို့ကို ခံစဉ်တွင်ပင် အထူးသဖြင့် အောင်မြင် ကြ၏’ (ရောမ ၈း ၃၇)။ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ အားနည်းခြင်းထဲမှလည်း ကယ်တင်တော်မူ၏။ ကျွနု်ပ်တို့၏ အပြစ်များမှလည်း ကယ်တင်တော်မူ၏။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ပြင်းထန်စွာ ငိုကြွေးခြင်းများသည် အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ ပြောင်းလဲသွားတတ်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့ ဆုံးရှုံးမှုများကို ဘုရားသခင်အသုံးပြု God uses our failures
ယုံကြည်သူအသစ်များအနေဖြင့် အသက်တာ၌ ဟောင်းသော အကျင့်များပြန်လည် ကျင့်တတ် သည်ကို အံ့သြလျက် ၀မ်းနည်းတတ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျမ်းစာကဘုရားသခင်၏ အစဉ်အမြဲက ကွယ်ကာမှုကို ခံယူနိင်ရန် ဆုတောင်ပါမည်အကြောင့် သတိပေးနေသည်။ သို့သော် သူတို့အပြစ်များ က သူတို့ကို ဆုံးရှုံးခြင်းထဲသို့ ခေါ်နေသည်ဟု သူတို့ထင်တတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့အသက်တာ အတွက် ၀မ်းနည်းတတ်ကြသည်။ ဆုံးရှုးသွားပြီဟု ထင်တတ်ကြသည်။ စာတန်ကလည်း သူတို့အား ‘သင််သည် ကောင်းသောသူမဟုတ်၊ ဆိုးသောသူပဲ၊ အသစ်သော အသက်တာ၌ အသက်ရှင်နိုင်မည် မဟုတ်၊ သင်ကြိုးစားနေခြင်းကို ရပ်တန့်ပေတော့’ ဟူ၍ တိုးတိုးပြောလေ့ ရှိသည်။ သို့သော် စာတန်ပြောသော စကားများ တစ်ခွန်းမျှ မမှန်။ အားလုံး မှားသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် များသောအားဖြင့် တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန် ဆုံးရှုံးမှုကို ရင်ဆိုင်တတ်ကြသည်။ ထိုအခါ ၀မ်းနည်းကြေကွဲတတ်ကြသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မုန်းသည်အထိ ခါးသီးမှုကို ခံထားတတ်ကြ သည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆုံးရှုံးမှုများကို အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာများ သင်ပေး ရန် အသုံးပြုနေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ဆုံးရှုံးမှုများအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကန့်သတ်ချက်သဘောကို သိစေသည်။
ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးကရုဏာတော်ကို ကျွနု်ပ်တို့ လိုအပ်ကြောင်း သိစေသည်။ ဘုရားသခင်၏ အကူအညီမပါဘဲ သန့်ရှင်းသော အသက်တာဖြင့် အသက်မရှင်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း နားလည်စေသည်။ ဘုရားသခင်သာလျှင် ကျွနု်ပ်တို့၏ ၀ိညာဉ်ခွန်အား စီးဆင်းလာရာ နေရာဖြစ် ကြောင်း သဘောပေါက်စေသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ရန်နှင့် လုံးလုံးအပ်နှံလာရန် တွန်းအားပေးလာသည်။ ဤသို့သောအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆုံးရှုံးမှုများသည် အသစ်သောအသက်တာ ၌ အောင်မြင်စွာ အသက်ရှင်ခြေလှမ်းနိုင်ရန် လှေကားထစ်သဖွယ် ဖြစ်လာသည်။
ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ကို သူ့ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အညီဖန်ဆင်း
God makes usacopy of Himself
ဘုရားသခင်သည် အာဒံကို သူ့ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အညီ ဖန်ဆင်းတော်မူ ခဲ့သည် (က၊ ၁း ၂၇)။ သူ့ လူမျိုးအားလုံးကိုလည်း သူ့ ပုံသဏ္ဌာန်တော်ဖြစ်စေဖို့ အမြဲ အလိုတော်ရှိသည်။ သူ၏ ပြည့်စုံတော်မူ ခြင်း ရှိသမျှနှင့်အညီ ပြည့်စုံစေလိုသည် (ဧဖက် ၃း ၁၉)။ သခင်ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့အား ဘုရား ပကတိကို ဆက်ဆံရသောသူဖြစ်ရန် ပြပြင်သောသူများဖြစ်ကြမည်အကြောင်’ ခေါ်တော်မူသည် (၂ ပေ၊ ၁း ၃-၄)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အသစ်သောသူဖြစ်ရန် ပြုပြင်ခြင်းခံရသော သူများဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ လူသည် ခရစ်တော်၌ ရှိလျှင် ထိုသူသည် အသစ်ပြုပြင်သောသူ ဖြစ်သည်။ သူ၌ ဟောင်းသောအရာရှိ သမျှ ကွယ်ပျောက်၍ အရာခပ်သိမ်းသည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ ဤအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံ တော်မှ ဖြစ်သည် (၂ ကော၊ ၅း ၁၇)။
ကျွနူ်ပ်တို့အသက်တာကို အသစ်ပြုပြင်ပေးသောသူသည် ဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြု ရပေမည်။ ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့ ၀ိညာဉ်သည် သေလျက်ရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်က အသစ်သော အသက်တာကို ခရစ်တော်၌ ပေးတော်မူ၏’ (ဧဖက် ၂း ၅)။ ‘ဘုရားသခင်က ကောင်းသော အကျင့်တို့ ကျင်လည်ရမည်အကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့ကို ခရစ်တော်၌ အသစ်သောသူ ဖြစ်စေ၏’ (ဧဖက် ၂း ၁၀)။
ထိုသို့ ‘ကျွနု်ပ်တို့၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက် သာ၍သာ၍ များပြားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တော်မူ၏’ (ဧဖက် ၃း ၂၀)။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အသက်တာ ဟောင်းကို ကျွနု်ပ်တို့နောက်မှာ ထားရစ်နိုင် ၏။ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် နှလုံးသားသစ်၊ သဘောသစ်ကို ရကြ၏ (ဧဖက် ၄း ၂၃)။ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်း ပါရမီနှင့် ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်မည်အကြောင်း ဘုရားသခင်နှင့် အတူအမျှဖန်ဆင်း သော လူသစ် ဖြစ်ကြ၏ (ဧဖက် ၄း ၂၄)။ ကျွနု်ပ်တို့၏ အသစ်သော မွေဖွားခြင်းက ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက်တာဟောင်းနှင့် တမူထူးခြားသော အသက်တာသစ်သို့ ပို့ဆောင်လျက် ရှိသည်။
God clothes us with Christ
ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ထဲ၌ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဗတိ္တဇံကို ခံသောအခါ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်၀တ်ဆောင်ကြခြင်း ဖြစ်သည် (ဂလာတိ ၃း ၂၇)။ ဘုရားသခင်က အသစ်သော၀တ်ရုံကို ခြုံစေတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ‘အ၀တ်ဟောင်း၊ အစုတ်’ကို ချွတ်ပေး၍ မှန်သောအသက် တာနှင့် အသက်ရှင်စေသော ၀တ်ရုံအသစ်ကို ၀တ်ခြုံစေတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ သည် ခရစ်တော်နှင့် ပတ်ရစ်ခြင်းခံရသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ ဖွက်ထားခြင်း ခံရသူများ ဖြစ်ကြသည် (ဂလာ၊ ၄း ၁၉)။ ‘ယေရှုခရစ်တော်သည် အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကို ငါတို့၌ ထင်ရှားစေတော်မူ၏ (၂ ကော၊ ၄း ၁၁)။ ဤသို့ဖြင့် သူတပါးသည် ကျွနု်ပ်တုို့ကို မြင်သောခါ ကျွနု်ပ်တို့၌ ရှိသော ခရစ်တော်ကို တွေ့ မြင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက ‘ယခုအသက်ရှင်သော ငါသည် အကျွနု်ပ် အစစ်အမှန်မဟုတ်။ ခရစ် တော်သည် ကျွနု်ပ်အထဲ၌ ရှင်တော်မူ၏’ (ဂလာ၊ ၂း ၁၉)ဟု ပြောပါသည်။ အကယ်စစ်စစ် ရှင်ပေါလု၌ ခန္ဓာကိုယ်ရှိသေးသည်။ သို့သော် သူ၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ပြောပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်ကို ယူတင်၀တ်ဆောင်သော အချိန်မှစ၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက်တာ သည် အသစ်သောအသက်တာနှင့် အသက်ရှင်ရန် ခရစ်တော်က လုပ်ဆောင်ပေးသွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘုရားခင်က ကျွနု်ပ်တို့၏ သဘောထားကို ပြောင်းလဲပေးသည်
God changes our behavior
ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခြင်းဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ ထူးခြားစွာအသက်ရှင်မှု အစပြုလာသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ ဘုရားသခင်ကို အခွင့်ပေးသောအခါ အံ့သြဖွယ်သောအမှုများ အသက်တာ၌ စတင်ဖြစ်လာသည်။ လိမ်လည်သောသူများက မှန်ကန်သောစကားကို စတင်ပြောလာသည်။ မဆင် မခြင် ဒေါနှင့်မောနှင့် ပြောတတ်သူက အမျက်ဒေါသကို ထိန်းတတ်လာသည်။
ဒေါသနှင့် အော်ဟစ် ငေါက်ငေါ် တတ်ခြင်းမှ သနားကြင်နာခြင်း၊ ချစ်ခြင်းသဘော ရှိလာသည်။ သူခိုးက ခိုးတတ်သော အကျင့်ကို ရပ်တန့်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို ချစ်သကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း အချင်းချင်း၏ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တတ်လာ ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား ပို၍ ကောင်းသောသူ ဖြစ်လာရန် သဘောထားအသစ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲပေးသည်။
ဘုရားသခင်သည် အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်တော်မမူ
God doesn’t hurry
ဘုရားသခင်သည် ထာ၀ရတည်ဆော်မူသော ဘုရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ထာ၀ရတည်မြဲသောအရာကို ပြင်ဆင်ပေးနေသည်။ သူသည် မည်သည့်အခါ၌မျှ စိတ်မြန်လက်မြန် မလုပ်ဆောင်ခဲ့။ ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ သူလုပ်တေသော အလုပ်သည် အင်မတန် အရေးကြီးသည် ဖြစ်၍ မည်သည့်အခါ၌မျှ လျင်မြန်စွာ မလုပ်ဆောင်ပါ။ အချိန်ယူ၍ မှန်မှန်လုပ်ဆောင် ပေးနေသည်။
သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့သည် သည်းခံခြင်း မရှိကြ။ ရေနှစ်ခြင်းခံပြီးပြီးချင်း ၀ိညာဉ်ရေး၌ ရင့်ကျက်သူ ဖြစ်လိုကြသည်။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့သော အသက်တာကို ချက်ချင်း လက်ငင်း ရရှိလိုကြသည်။ ဒုက္ခများ နှင့် အသက်တာကြီးထွားခြင်းကို အလိုမရှိကြ။ ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြည်းညှင်းစွာ လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို မစောင့်နိုင်ကြပါ။ ထိုကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ အဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားမှုကို မမြင်နိုင် တော့ဘဲ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့ကာ ဆုံးရှုံးပြီဟု ထင်မှတ်တတ်ကြသည်။
၀ီစတန်ချာချီ ပြောသကဲသို့ ‘ဘယ်တော့မှ …. ဘယ်တော့မှ …. ဘယ်တော့မှ … အရှုံးမပေး သင့်ပေ’။ ရှင်ပေါလုက ‘သင်တို့တွင် ကောင်းသောအမှုကို ပြုစပြုတော်မူသော သူသည် ယေရှု ခရစ်၏ နေ့ရက်တိုင်အောင် ပြီးစီးလျက် ပြုတော်မူမည်ဟု ငါသဘောကျ၏’ (ဖိလိ၊ ၁း ၆)။ ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ အသစ်မွေးဖွားသောအချိန်မှစ၍ ကျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ စတင်အုပ်လုပ်နေပြီး ဖြစ်သည်။
ထိုအလုပ်သည် ရပ်တန့်သွားခြင်း မရှိပါ။ ယခုလည်း လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကျျွနု်ပ်တို့ သေသွားသည်အထိ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ခရစ်တော်ချီဆောင်ခြင်း နေ့ရက်တိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျျွနု်ပ်တို့အထဲ၌ လုပ်ဆောင် နေသောအလုပ် မပြီးစီသေးသဖြင့် သည်းခံ၍ စောင့်ဆိုင်ကြ့င် လိုအပ်သည်။
၀န်ခံချက်။ ။ “World English Institute” သင်ခန်းစာ Advanced Book Two, lesson မှ “The New Life” ခေါင်းစဉ်ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
မေတ္တာဖြင့် - ပေါလ်ရာလ်မှုန်း
လူသားစား လူရိုင်းများထံ သွားသော ဘုရားသခင်၏စေတမန်
Shwe Canaan TV: အသစ်သော အသက်တာ (The New Life)